दाह्री बढाउँन यी पौष्टिक चीजहरू खानुहोस। - Varient - News Magazine
बेसार अनुहारमा लगाउनुका लाभहरू।
मेकअपको फाइदा र साइड इफेक्ट्सहरु।
Jul 23, 202108
अनुहारमा कागती लगाउनुका फाइदा र बेफाईदाहरु ।
कपालको लागी निमका फाईदाहरु।
अचानक मोटोपन बढ्नुका कारणहरु ।
Jul 23, 202109
वजन घटाउनका लागि बिहानको व्यायाम बढी लाभदायक...
छिटो तौल घटाउन ६ प्रकारका आहार खानुहोस ।
Jul 23, 202107
यी ५ फुडहरु जसमा Zero क्यालोरी हुन्छ र यसको प्रयोगले...
वजन बढाउनको लागी किशमिश खाने तरिका ।
डुब्लो वा स्कीनी महिलाहरूले वजन बढाउने उपायहरु...
शरिरको कुनै भाग काटेमा के गर्ने ?
Jul 20, 202105
कुकुरले टोकेमा गर्नुपर्ने प्राथमिक उपचार ।
Jul 20, 202107
घाँटीमा अडकेको माछाको काँडा कसरी हटाउने ?
घाँटीमा चोट लाग्यो भने के गर्ने ?
काँडाँ निकाल्ने घरेलु उपाय र उपचारहरु ।
दाँत र गिँजा बलियो बनाउँन ४ चिजहरु खानुहोस।
दाह्री बढाउँन यी पौष्टिक चीजहरू खानुहोस।
नुन पानीका फाईदाहरु ।
भोक कम गर्ने घरेलु उपचारहरु।
दाँत बलियो बनाउँने उपायहरू।
चुकन्दरको रस कपालका लागि लाभदायक हुन्छ ।
मिश्रीका फाइदाहरु ।
Jul 22, 202107
Jul 22, 202105
सेतो आँटा वा मैदाको साइड इफेक्टहरू ।
सुपारीले यी गम्भिर रोगहरु निम्त्याउछ ।
बाझोँपन हुनुका कारण र यसको उपचार।
Jul 24, 202108
वीर्य अभावको लक्षणहरु र यसका उपचारहरु जान्नुहोस्...
के हो त वजाइनल इन्फेक्सन र यसबारे बच्ने उपाय...
म्याद सकिएको कन्डमको बेफाइदाहरू।
सेक्ससँग सम्बन्धित महत्त्वपूण प्रश्न र उत्तरहरु।
Jul 20, 2021 - 10:42
दाह्री पाल्नु कसैको सौख हो। तर कतिपय व्यक्ति अनुसार दाह्री पाल्ने नपाल्ने भन्ने कुरा उनिहरुको सौख र बिचारधारा अनुसार फरक फरक रहन्छ। कसैलाई दाह्री राख्न मन पर्छ भने कसैलाई मन पर्दैन। र दाह्री पाल्ने सन्दर्भमा आफ्नो आफ्नो स्वभाव हुन्छ। दाह्री मन पराउनेहरुले यसलाई फेसनको रूप लिइसकेको छन जुन युवायुवतीहरू धेरैले मन पराइएको छ ।
यस शैलीको कारणले गर्दा दाह्री आकर्षक बनाउनको लागि बार्बरको मा गई दाह्री सेट गराउने फेशन को रुपमा बिकाश भइसकेको छ। तर कसैको दाह्री पातलो वा कम भएको कारण आफ्नो दाह्री को बारेमा पुरुषहरू चिन्तित हुन सक्छन्। धेरै पुरुषहरुलाई दाह्रीको बृद्धि गर्न को लागी सजिलो तरीका थाहा नहुन सक्छ।
यदि तपाई यस बारे चिन्तित हुनुहुन्छ भने तपाईले धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन किनकि तपाईको डाइटमा केहि चीजहरू थपेर तपाईले आफ्नो दाह्री वा कपालको वृद्धि बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागी नियमित रुपमा आफ्नो डाइट वा खानामा निम्न चिजहरु समावेश गर्न सक्नुहुन्छ।
दालचिनीका धेरै फाइदाहरू छन्। यसले शरीरको तापक्रम वृद्दि वा शरिरमा न्यानोपन र तातपोपन वृद्धि गर्दछ जसले कपालको जरामा अक्सिजन युक्त रक्त संचार बढाउन मद्दत गर्दछ। यसले दाह्रीलाई बाक्लो र राम्रो पोषण पनि दिन्छ। यसलाई बिहान खाली पेटमा मह र तातो पानीको साथ सेवन गर्नु उत्तम मानिन्छ।
२.फर्सीको बिउ वा दाना
बोक्रामुक्त, र नुनमुक्त फर्सीको दाना जिंकले भरिपुणर् रहेको हुन्छ। जिंक एक शक्तिशाली माइक्रो पोषक तत्व हो, जसले कपालको बृद्धिमा सबैभन्दा महत्त्वपूणर् भूमिका खेल्दछ। फर्सीको दाना सजिलैसँग बजारमा वा हामै्र करेसाबारीमा पाउँन सकिन्छ। यसलाई सुक्खा, वा पानीमा भिजाएर साथै अचारमा पनि फर्सीको दाना पिसेर खान सकिन्छ।
हाम्रो मनपर्ने पत्तेदार तरकारीहरू मध्य पालकको साग पनि एक हो। पालकमा भिटामिन ए, फोलिक एसिड, आइरन, भिटामिन सी र बीटा क्यारोटीन हुन्छ। यी सबै गुणहरूले छाला र दाह्री नरम र मस्तिष्क स्वस्थ राख्ने काम गर्दछ। यसको प्रयोग गर्ने उत्तम तरिका भनेको रसको रूपमा पिउनु वा तपाईं यसलाई स्मुदि बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं आफ्नो दाह्रीको वृद्धि वृद्धि गर्न चाहानुहुन्छ भने, हरेक दिन एक गिलास पालकको जुस पिउनुहोस्। पालकको साग पनि तरकारीको रुपमा खादाँ पनि धेरै फाइदाजनक हुन्छ।
टूना माछा ओमेगा फ्याट्टी एसिडको सबैभन्दा ठूलो एवंम मुख्य स्रोतको रूपमा परिचित छ। यो एक त्यस्तो तत्व हो जुन शरीरमा आफैँ उत्पादन हुँदैन। ओमेगा ३ छाला र कपालको उज्यालोको लागि धेरै महत्त्वपूण मानिन्छ। र यसको सन्तुलित एवंम नियमित सेवनले नयाँ कपाल फोलिकल्स लाई प्रोत्साहित गर्दछ जसले नयाँ कपालको रेशाहरु उत्पन्न हुन थाल्दछ। यदि तपाईं मांसाहारी हुनुहुन्छ र आफ्नो दाह्री कपाल बढाउन चाहानुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो खानामा टुना माछा पनि समावेश गर्नुपर्छ। तर यदि तपाईं शाकाहारी हुनुहुन्छ भने, तपाईं दाह्री र कपाल बढाउनका लागि पालक र फर्सीको दाना जस्ता शाकाहारी विकल्पहरू रोज्न सक्नुहुन्छ।
माथीका चीजहरू खाँदा दाह्री र कपाल मात्र बढ्दैन, यसका साथै तपाईंको शरीरले आवश्यक पोषकहरू पनि पाउनेछ। अब ढिलाइ नगरिकन, तपाईंको आहारमा यी स्वस्थ चीजहरू समावेश गर्नुहोस्।
ह्यान्ड सेनिटाइजर के हो र प्रयोग गर्ने सही तरीका ।
Jul 20, 202103
स्मरण शक्ति बढाउने तरिका ।
पेट सफा गर्नका लागि घरेलु उपचारहरु।
Jul 20, 202102
पुरुषहरूमा यौन चाहना कमीका कारण र लक्षणहरू।
ब्लयाक कफी पिउँनुका फाइदा र बेफाइदाहरु।
पानीमा डुब्दा कसरी बच्ने र डुबेको व्यक्तिलाई कसरी बचाउने।
वजन घटाउन नर्गनुहोस यी ७ गल्तिहरु ।
भिटामिन-डी ले भरिपुण खाद्य पदार्थहरू।
Jul 22, 202102
ह्यान्ड सेनिटाइजर, ह्यान्ड एन्टीसेप्टिक वा ह्यान्ड रबको रूपमा पनि चिनिन्छ, जुन हातहरूमा...
फ्याट कम गर्नका लागि पाँच स्मूदी रेसिपिहरू ।
यी ५ फुडहरु जसमा Zero क्यालोरी हुन्छ र यसको प्रयोगले तौल...
तातो पानी पिएर यसरि घटाँउनुहोस आफ्नो वजन ।